laacib » Ka Hor Suuqa Bisha January Iyo Dhaawicii Samuel Umtiti, Maamulka Barcelona Oo Diyaarsaday Liiska Difaacyada Dhexe Ee Ay La Soo Saxiixan Karaan.
Ka Hor Suuqa Bisha January Iyo Dhaawicii Samuel Umtiti, Maamulka Barcelona Oo Diyaarsaday Liiska Difaacyada Dhexe Ee Ay La Soo Saxiixan Karaan.
Maamulka laacibkii Barcelona ayaa isha ku haya difaacyo dhexe oo ay doonayaan in ay bisha January la soo saxiixdaan kadib dhibaatada uu Valverde kala kulmayo dhaawacyada soo gaadhay Samuel Umtiti iyo Javier Mascherano waxaana jira xidigo ay haddaba maamulka Camp Nou la socdaan xaaladooda si ay ula soo saxiixaan marka uu suuqu kala iibisaga bisha January furmo.
Ugu horayn Barcelona ayaan doonayn in bisha January ay iska iibiso Javier Mascherano kaas oo qorshaysanayay in uu baxo waxayna maamulka Balaugrana doonayaan in ay la soo saxiixdaan difaaca dhexe oo uu Valverde ku baxsado haddii ganaaxa ama dhaawacyo sida hadda oo kale ay ku yimaadaan xidigaha dookha kowaad uga ah difaaciisa dhexe.
Mid ka mid ah bartilmaameedyada Barcelona ayaa ah difaaca laacibkii Bayer Leverkusen ee Jonathan Tah kaas oo lagu qiimaynayo 20 milyan euros, wuxuuna 20 sano jirkani diyaar u yahay inuu Camp Nou ku soo biiro laakiin sida uu wargayska Sport sheegay shaqaalaha Barcelona ayaa saxiixiisa kala badhka xili ciyaareedka u arka mid halis ah.
Laakiin bartilmaameedka ay Barcelona u aragto mid aan wax halis ah kala kulmi karin ayaa ah difaaca dhexe ee laacibkii Real Sociedad ee Inigo Martinez oo ay suuqii xagaagii la soo dhaafay Barcelona doonaysay in ay bixiso lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo. Martinez ayaa suuqii xagaaga Barcelona kula heshiiyay in uu ku soo biiro laakiin maamulka Camp Nou ayaa ka joogsaday in ay bixiyaan lacagta 32 milyan euroska ah ee heshiiskiisa lagu burburin karo.
Barcelona ayaa Inigo Martinez u sheegtay in uu heli doono daqiiqado uu kaga ciyaaro laacibkii Valverde laakiin suuqii xagaaga ayayna u damaanad qaadi karin in uu shaxda laacibkii kowaad ka mid noqon karo, waxayna ugu danbayn Barcelona markaas go’aansaday in ayna la soo saxiixan balse hadda oo Umtiti uu muddo 2 bilood ah maqnaan doono isla markaana mustaqbalka Mascherano aanu kala cadayn ayay Barca xidigan doonaysaa in ay January la soo wareegto.
Dhinaca kale Barcelona ayaa la socota xaalada difaaca laacibkii Lazio ee Stefan de Vrij iyada oo waliba uu heshiiskiisa laacibkii ree Talyaani dhacayo dhamaadka xili ciyaareedkan, waxaana loo arkaa in haddii ay Barcelona u dhaqaaqdo saxixia De Vrij ay noqon karto hawlgal sahlan.Lazio ayaa Stefan De Vrij iska iibin doonta suuqa January haddii aanu laacibkii heshiis cusub u saxiixin halkii uu si xor ah kaga bixi lahaa.
Ugu danbayn Barcelona ayaa la socota xaalada difaaca laacibkii Lyon ee Mouctar Diakhaby wuxuuna 20 sano jirkani shaqo fiican ka qabanayaa laacibkii horyaalka France ka dhisan ee Lyon iyada oo loo arko mid awood badan leh isla markaana uu sahlanaan karo hawlgalka bisha January lagula soo wareegi karaa.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo 25 maalmood ka hadhsan yihiin waqtiga uu si rasmi ah dib ugu furmi doono suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee waqtiga qaboobuhu, ayay maamulka Barcelona isha ku hayaan bartilmaameedyo difaacyo ay laacibkii Valverde ku soo xoojin karaan.